Cycle & Carriage Myanmar မှ ပထမဆုံး ကျင်းပခဲ့သော Mercedes-Benz နဲ့ Mazda တို့ပါဝင်သည့် အရောင်းမြင့်တင်ရေး roadshow နှင့် နှစ် ၁၂ဝ ပြည့် အခမ်းအနား
Cycle and Carriage Myanmar (CCM) ကနေပြီး Mercedes-Benz နဲ့ Mazda ကားအမှတ်တံဆိပ် တွေအတွက် ပထမဆုံး အရောင်းမြင့်တင်ရေး roadshow ကို Myanmar Plaza ရှိ Concourse Area မှာ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကနေပြီး စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့ကနေ ၂၇ ရက်နေ့အထိ နေ့စဉ် နံနက် ၉:ဝဝ နာရီကနေ ည ၉:ဝဝ နာရီအထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး CCM ရဲ့ နှစ် ၁၂ဝ ပြည့် အခမ်းအနားကိုလည်း တစ်ပါတည်း ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာပါ။
ပွဲကို ပြုလုပ်ကျင်းပရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ထူးခြားတဲ့ မော်တော်ယာဉ် အထိအတွေ့ကို ကားမြတ်နိုးသူတွေ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခွင့်ရရှိစေကာ လွယ်ကူချောမွေ့မှုကို အများက သိရှိသွားစေရန်ဖြစ်ပြီး ပွဲမှာတော့ Mercedes-Benz နဲ့ Mazda အမျိုးအစား ကားများစွာကို ထည့်သွင်းပြသထားပါတယ်။
Roadshow မှာ CCM ကနေ ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်တဲ့ Mercedes-Benz ကနေပြီး 2018 E-Class model ကိုထည့်သွင်း ပြသထားပြီး အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအနေနဲ့ကတော့ GLE နဲ့ GLS model တွေကို ထည့်သွင်းပြသသွားမှာပါ။ Promotion အနေနဲ့ roadshow ကာလအတွင်း GLE နဲ့ GLS ကားတွေကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် warranty နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ၄ နှစ်အပြင် ရန်ကုန်လိုင်စင်ကိုလည်း အခမဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လာမယ့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်း ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်း Prosperity Promotion အနေနဲ့ Mercedes-Benz Myanmar ကနေဝယ်ယူတဲ့ ကားသစ်အားလုံးကို warranty နဲ့ service ၄ နှစ် အပြင် ဈေးနှုန်းကလည်း ဒေါ်လာ ၆၈,၈၈၈ ကနေပြီး စတင်ဝယ်ယူလို့ရမှာပါ။
CCM roadshow မှာ ကျော်ကြားလှတဲ့ ဂျပန်ကားအမှတ်တံဆိပ် Mazda အမျိုးအစား ကိုလည်း ထည့်သွင်းပြသသွားခဲ့ပြီး Mazda2၊ Mazda3၊ Mazda6၊ CX-3 ၊ CX-5 နဲ့ CX-9 စတဲ့ models တွေအပါအဝင် ကားများစွာပါဝင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းတဲ့ Promotion အနေနဲ့ကတော့ ဝယ်ယူတဲ့သူတွေဟာ ရန်ကုန်လိုင်စင် အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီး discount အနေနဲ့ကတော့ USD 10,000 အထိရရှိနိုင်မှာပါ။
၁၈၉၉ ခုနှစ်ကထဲက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Cycle & Carriage ဟာ အခု ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ နှစ် ၁၂ဝ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ Cycle & Carriage ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာပြီး စင်ကာပူ၊ မလေးရှားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွေကို အကောင်းဆုံးကားတွေ တင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ ကုမ္ပဏီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Cycle & Carriage Myanmar launched the first Mercedes-Benz and Mazda sales promotions and 120ᵀᴴ Anniversary Ceremony
Cycle & Carriage Myanmar (CCM) launched the first-ever sales promotions roadshow for Mercedes-Benz and Mazda at Concourse Area of Myanmar Plaza shopping mall on January 24ᵀᴴ. The roadshow will be held on 24ᵀᴴ,25ᵀᴴand 27ᵀᴴJanuary from 9:00 AM to 9:00 PM and CCM will also be celebrating their 120ᵀᴴ Anniversary Ceremony in this event.
At the roadshow, CCM is displayingarange of Mercedes-Benz and Mazda vehicles and the main purpose is to bring exceptional automotive experience directly to car lovers and public at their convenience.
At the road show, CCM is featuring 2018 E-Class Mercedes-Benz and also will be displaying Mercedes-Benz GLE & GSL models for the sales promotions. Mercedes-Benz Myanmar is offering Free Yangon License and four years' warranty and service for any Mercedes-Benz GLE & GLS models purchase during the roadshow period. Furthermore, all new vehicles purchased from Mercedes-Benz Myanmar during the Chinese New Year period, 'Prosperity Promotions' will receive four years warranty and service with attractive starting price from USD 68,888.
Also at the Cycle & Carriage Myanmar roadshow, popular premium Japanese automotive brand, Mazda will be featuring its full range of vehicles, including the Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5 and CX-9. In addition, Cycle & Carriage Myanmar is offering attractive promotions including Free Yangon License and discounts up to USD 10,000.
Founded in 1899, CCM turns 120 in 2019. Started in Kuala Lumpur, Cycle and Carriage is nowaleading regional automotive group in Southeast Asia and one of the most established automobile distributors in Singapore, Malaysia and Myanmar.
ရန်ကုန်မြို့တွင်းဧရိယာ (down-town) ၆ မြို့နယ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များကို စီးနင်းခွင့် လုံးဝပေးမည်မဟုတ်